Soo dejisan Hola 1.10.199 – Vessoft
Soo dejisan Hola
Hola – codsi waxtar leh si ay u helaan in ay internetka hor istaagay oo ku keydsadaan tallaabooyinka gaarka ah ee internet-ka ah. Software soo bandhigayaa liiska kulan iyo codsiyada oo kala duwan oo la macaamilaan codsiyada iyo u saamaxaaya in ay iyaga ku xidhmaan shabakada dalwaddii. Hola bixisaa doorasho ballaaran ee dalalka diyaar u ah xiriir si aad u server VPN ah. Sidoo kale software hagaajinaysaa xawaaraha khayraadka web iyo badbaadiyay gaadiidka internet-ka. Hola ka kooban yahay tiro badan oo ah qalab si ay ula qabsadaan goobaha guud iyo network baahida isticmaalaha.
Helitaanka khayraadka web hor istaagay
Joogista qarsoodi ah ee Internet-ka
Doorashada Wide ee server VPN ah
Kordhay xawaaraha oo ka mid ah loading bogagga internetka
Hola Software la xiriira: